Luis Carlos Díaz, Mpanao Gazety Sady Mpiaro Ny Zon’olombelona Notazonin’ny Hery Fiarovam-panjakana Ao Venezoelà · Global Voices teny Malagasy
Luis Carlos Díaz, Mpanao Gazety Sady Mpiaro Ny Zon'olombelona Notazonin'ny Hery Fiarovam-panjakana Ao Venezoelà
Takian'ireo vondrom-piarahamonina anatiny sy ivelan'i Venezoelà ny hamotsorana azy
Voadika ny 26 Marsa 2019 11:39 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, Español, Português, Nederlands, Ελληνικά, English
Luis Carlos Díaz. Sary nalaina avy amin'ny sary famantarana azy ao amin'ny Facebook.
Le journaliste et défenseur des droits humains Luis Carlos Díaz détenu par les services de renseignement au Venezuela
Vao maraimbe tamin'ny 12 Martsa, voamarina fa nosamborin'ny Sampam-pitsikilovan'ny Polisy Bolivariana (SEBIN) ilay mpanao gazety Venezoeliàna, Luis Carlos Díaz.
Ny vadiny, Naky soto, fanta-daza ihany koa amin'ny maha mpanadihady ara-politika azy, no nitatitra ny tsy fahitàna azy ora maromaro talohan'izao.
Nanome lalana ny #LiberenaLuisCarlos (Afaho i Luis Carlos) ny tenifototra #DondeEstaLuisCarlos (Aiza i Luis Carlos?) izay nanjary lohateny malaza be haingana teo amin'ny tontolon'ny twitter tao Venezoelà sy manerana an'ireo bitsika sangany indrindra erantany.
Mpikambana malaza sy efa hatry ny ela teto amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices i Luis Carlos. Nandritra ny efa ho folo taona izao, asa nataony ny fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fampiasana an'ireo fantsona nomerika mba hitazonana ny fahazoan'ny besinimaro vaovao ao anatin'ny krizy misy ankehitriny ao Venezoelà. Mikarakara fandaharanasa amin'ny lahatsary faran'izay malaza ihany koa i Luis sy Soto (teo amin'ny YouTube taloha, ankehitriny eo amin'ny Patreon) izay anoloran'izy ireo fanehoankevitra ara-politika sy hatsikana.
Fantatra amin'ny toe-panahiny sy amin'ny maha-mpanolotsaina azy i Luis Carlos, ary koa noho ny fahafahany manokana mahazo sy manazava ny hasarotry ny tontolo sarotra manodidina ny serasera nomerika ao Venezoela.
Araka ny voalazan'i Marco Ruiz, mpikambana amin'ny SNTP izay nanatrika ny famoriana olona nanoloana ny biraon'ny fampanoavana, ny marainan'ny 12 martsa, nosavain'ireo mpiasan'ny SEBIN ny efitranon'i Diaz sy Soto ary fitaovana elektronika marobe no nalain'izy ireo.
Kaomisiona iray avy amin'ny SEBIN no nisava ny fonenan'i Luis Carlos Diaz. Nalain'izy ireo ireo solosaina, ireo tahiry USB, finday ary ankoatr'izay koa ny vola. Navelan'izy ireo hanatrika teo i Diaz ary nopetahin'izy ireo rojovy.Tamin'io fotoana io, nambarany fa nodarohana izy nandritra ny fitazonana azy tamin'ny 5ora 30minitra hariva.
Luis Carlos Díaz sy ny vadiny, ilay mpaneho hevitra ara-politika Naky Soto, izay niangavy ny vahoaka mba hanaraka azy eny amin'ny biraon'ny fampanoavana mba hangataka ny fanafahana an'i Diaz. Sary notsongaina teo amin'ny sary famantarana an'i Diaz teo amin'ny Facebook.
Taorian'ny nisavàn'ireo manampahefana ny tranon'izy ireo, ary lasa avy eo, nitondra an'i Díaz nanaraka azy ireo, nandefa antso teo amin'ny Twitter i Soto, niangavy ny olona mba hanaraka azy any amin'ny biraon'ny fampanoavana ny 12 martsa ary hitaky ny mba hanafahana ny vadiny.
Nambaran'i Naky Soto tamin'ny Global Voices teo amin'ny WhatsApp fa norahonana i Diaz andro vitsivitsy talohan'ny nisamborana azy. Araka ny volazan'ilay media an-tambajotra Clases de Periodismo, norahonan'ireo kaonty Twitter mpomba ny governemanta i Diaz taorian'ny toa hoe filazàna ampahibemaso nataon'ireo mpitarika ara-politika fa nanana anjara tamin'ny fiketrehana ilay tsy fahatomombanana niteraka tsy fisiana herinaratra nandritra ny andro maromaro tany amin'ny faritra maro tao Venezoela i Diaz. Tsy misy porofo mihitsy miaraka amin'ireo fitorohana ireo.
Nisy koa solotenan'ny Provea (fandaharanasa Asa-Fanabeaza momba ny zon'olombelona) nanatrika teo ihany koa nandritra ny fisavàna nataon'ny SEBIN ary nandray ny fijoroana vavolombelona nataon'i Naky Soto manao hoe:
Afaka niresaka fohy tamin'i Díaz i Soto, izay niteny taminy fa nosamborina izy rehefa iny teny an-dàlana hody tamin'ny bisikileta iny. Tamin'io fotoana io ihany, nohamafisiny fa niharan'ny daroka sy fanambaniana ihany koa izy nandritra ny fitazonana azy. Araka ny vaovao nomen'ireo polisy nandritra ny fisavàna nataon'izy ireo, nahavita “heloka bevava nampiasàna solosaina” i Díaz.
Nanampy ny tatitra fa i Soto, izay avy nitsabo tena noho ny homamiadan'ny nono, dia karohan-dry zareo manampahefana ihany koa:
Araka ireo fijoroana vavolombelona, nampandre an'i Soto ireo polisy fa karohan'ireo manampahefana ihany koa izy, saingy, noho ny toe-pahasalamany (mararin'ny homamiadana), dia tsy mbola hanatanteraka izany aloha izy ireo hatreto, saingy kosa “mety hiverina izy ireo haka azy raha toa izy [Soto] be kilazakilaza”.
Mitantara ilay trangan-javatra ny mpanao gazety, Luz Mely Reyes, ary mizara ny lahatsary miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona nataon'i Soto:
“#FreeLuisCarlos – #AfahoLuisCarlos Naky io. Mararin'ny homamiadana izy. Ny vadiny, mpanao gazety sady mpikatroka miaro ny zon'olombelona dia nosamborin'ny SEBIN tamin'ny 11 martsa. Nandeha tany amin'ny foiben-toeran'ny fampanoavana i Naky ora vitsivitsy avy eo, nitaky ny famoahana an'i Luis Carlos. (faham-baovao misy ny tantara manontolo)”
Ora maromaro taty aoriana, narahan'ireo mpikambana tamin'ny Provea, ny SNTP sy ireo mpanohana azy hafa i Soto. Tao anatin'ny fijoroany vavolombelona ampahibemaso, nambarany ny “fisamborana fahatany” an'i Díaz ary nanampy azy hoe:
“Takianay ny famoahana azy tanteraka ary tiany ny hitaky amin'ny Kaomisiona miaro ny zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana ao Caracas mba hanampy anay hahalala hoe manao ahoana ny fahasalamany ara-batana sy ara-tsaina.”
Naky Soto, vadin'i Luis Carlos Díaz, dia nanamafy fa tamin'ny alalanà lahatsary iray motramotraka natsangaana avy amin'ny iray tamin'ireo nozarainy [teo amin'ireo media sosialy] no nentina nisamborana an'ilay mpikatroka. “Voalazan'ilay fandraketana an-tsary fa tratra ambodiomby izy ary teo ambonin'ny bisikiletany. Tsy misy mihitsy fomba hiampangàna azy araka izay kasain'izy ireo hatao.
Ny 12 Martsa tamin'ny 3 ora, tolakandro, ora ao an-toerana, mbola voatazona tany am-ponja i Díaz ary tsy mbola voaheloka na tamin'ny heloka inona na inona.
Hitohy hanaraka ny fivoaran'ity tantara ity ny vondrom-piarahamonina Global Voices ary hijoro hiray hina amin'i Luis Carlos sy ny fianakaviany.